ကျေးဇူးတင်လျက် အသက်ရှင်ခြင်း၊ နှစ်သစ် ၂၀၁၇
၀ိညာဉ်ရေးရာအသက်တာ၌ ကြီးထွားရင့်ကျက်ပြီး ပို၍ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်သူ ဖြစ်လိုခြင်းကြောင့် `ကျေးဇူးတင်သော အသက်တာ´ ဟု အမည်ပေးထားသော အိုးလေး တစ်လုံးကို စူး စတင်ထားရှိခဲ့သည်။ ညတိုင်းတွင် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်စရာ အကြောင်းကို စာရွက်ပိုင်းလေးပေါ်၌ရေးပြီး အိုးလေးထဲ
Read more: ကျေးဇူးတင်လျက် အသက်ရှင်ခြင်း၊ နှစ်သစ် ၂၀၁၇
ထောင်ချောက်ကိုရှောင် 12.04.2016 နေ့စဉ်ခွန်အား
ဖတ်ရန်: က ၄း၁-၈ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ၁ရာ ၁၉-၂၁ □ လု ၁၁း၂၉-၅၄
သင်သည် မှန်ကန်စွာ ပြုခဲ့လျှင် မျက်နှာပြုံးရွှင် နိုင်ရမည်။ သို့ရာတွင် သင်သည် မကောင်းမှုကို ပြုခဲ့သဖြင့် အပြစ်တရား သည် . . . သင့်တံခါး အနီးတွင် ချောင်းမြောင်း လျက်ရှိ၏။ အပြစ်က သင့်ကို
Read more: ထောင်ချောက်ကိုရှောင် 12.04.2016 နေ့စဉ်ခွန်အား
သတ္တမမြောက် ကဗျာစာပိုဒ် The Seventh Stanza
ဖတ်ရန်: လု ၂း၈-၁၄ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ယောန 1-5 □ ဗျာ ၁၀
ယနေ့တွင် ဒါဝိဒ်မြို့၌ သခင်ခရစ်တော်တည်း ဟူသော ကယ်တင်သော အရှင်သည် သင်တို့အဖို့ အလို့ငှာ ဘွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူပြီ။ (း၁၁)
၁၈၆၁ ခုနှစ် နွေရာသီ၌ Henry Wadsworth
Read more: သတ္တမမြောက် ကဗျာစာပိုဒ် The Seventh Stanza
အမှန်စင်စစ် ဘ၀တွင် ပြဿနာ၏ အရင်းခံက ကိုယ်သာဖြစ်နေတတ်သည်။ Our Daily Bread; Help from the Outsidehttp://myanmar-odb.org/
ပြင်ပမှ အကူအညီ Help from the Outside
ဖတ်ရန်: ယေ ၁၇း၇-၁၃ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ယေဇ ၃၀-၃၂ □ ၁ ပေ ၄
... ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၏ စိတ်နှလုံးထက် သာ၍ ကြီးမြတ်သည်ဖြစ်၍ အလုံးစုံတို့ကို သိတော်မူ သည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ (၁ ယော ၃း၂၀)
အလုပ်ကိစ္စဖြင့် အခြားနေရာသို့ ခရီးသွားစဉ်
Read more: အမှန်စင်စစ် ဘ၀တွင် ပြဿနာ၏ အရင်းခံက...
ငန်းများနှင့် ပေါင်းသင်းရခက်သည့်လူများ Of Geese and Difficult People 12.11.2015 နေ့စဉ်ခွန်အား.
ငန်းများနှင့် ပေါင်းသင်းရခက်သည့်လူများ Of Geese and Difficult People
ဖတ်ရန်: ရောမ ၁၂း၁၄-၂၁ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ယေ ၅၁ - ၅၂ □ ဟေဗြဲ ၉
သင်တို့သည် တတ်နိုင်သမျှအတိုင်း လူအပေါင်းတို့နှင့် အသင့်အတင့် နေကြ လော့။ (း၁၈)
Read more: ငန်းများနှင့် ပေါင်းသင်းရခက်သည့်လူများ Of Geese...
နေ့စဉ်ခွန်အား အော်ဟစ်သောအခါ ထူးတော်မူသည်
Read: ဟေရှာ ၃၀း၁၅-၂၂ | Bible inaYear: □ ထွက် ၉-၁၁ □ မ ၁၅း၂၁-၃၉
ကျွန်ုပ်၏မြေးများ ငယ်စဉ်က သူတို့ ဖခင်က သူတို့ကိုခေါ်ပြီး “The Lion King” ပြဇာတ်ကို သွားကြည့်ကြသည်။ ခြင်္သေ့ငယ်လေး စင်ဘားသည် ယုတ်မာသော ဦးလေးဖြစ်သူ၏ လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးသွားသည့် ဖခင်ဘုရင်ကြီး မူဖာဆာ၏ကိုယ်ပေါ်ရပ်လျက် “ကယ်ကြပါ၊ ကယ်ကြပါ၊
Read more: နေ့စဉ်ခွန်အား အော်ဟစ်သောအခါ ထူးတော်မူသည်
အဖဘုရားသခင်၏အံ့သြဘွယ်များ၊ သားတော်ယေရှု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသက်တာ အားလုံး၊ ၂၀၁၅နှစ်သစ်မင်္ဂလာတွင် အားလုံးအပေါ်သက်ရောက်ပါစေ..။ အာမင်
ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်၌ မတွေ့နိုင်လောက် အောင် သေးငယ်သည်။ (စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဘယ်မှာ ရှိသည်ကို မသိလျှင် အစမ်းရှာကြည့်ပါ။) လူဦးရေ အလွန်ထူထပ်ခြင်းကြောင့် အခြားသူအတွက် စဉ်းစားပေးရခြင်းက အလွန်အရေးကြီးသည်။ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် သူနှင့်စေ့စပ်ထားသည့် အမျိုးသမီး စင်္ကာပူသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်
Read more: စင်္ကာပူနိုင်ငံသည် သေးငယ်သောကျွန်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်၏ ကိုင်ဖမ်းမှု - Our Daily Bread (31-Dec-2013)
31.12.2013 ဖတ်ရန်: ရော ၈း၃၁-၃၉
အကြင်အကျိုးကိုပေးခြင်းငှာ ခရစ်တော်သည် ငါ့ကိုကိုင်ဖမ်းတော် မူ၏။ ထိုအကျိုးကို ကိုင်မိခြင်းငှာ ငါ ပြေး၍ လိုက်သေး၏။ ဖိ ၃း၁၂
သမ္မာကျမ်းစာ တစ်နှစ်တာ: □ မာလခိ ၁-၄ □ ဗျာ ၂၂
ပျားပန်းခပ် ရှုပ်ထွေးသောလမ်းကို ကလေးငယ်များနှင့် ဖြတ်ကူးချိန်ဆိုလျှင်
Read more: ကိုယ်တော်၏ ကိုင်ဖမ်းမှု - Our Daily Bread...
အုပ်စုအားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါ (DailyHope)
ထိုအခါ လက်ခြေသေသောသူတယောက်ကို အိပ်ရာနှင့်တကွ အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့၍ ရှေ့တော်၌သွင်းထားခြင်းငှါ ရှာကြံကြ၏။
လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့် ဝင်စရာလမ်းကို မတွေ့သဖြင့် အိမ်မိုးပေါ်သို့တက်၍ အုတ်မိုးကိုဖောက်ပြီးမှ လူနာကို အိပ်ယာနှင့်တကွ လူများအလယ် ယေရှု၏
Read more: အုပ်စုအားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါ (DailyHope)
လူများအပေါ်ယုံကြည်အားကိုးခြင်းနှင့်ဘုရားသခင် TODAY’S SCRIPTURE
အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်၏အလိုကိုဆောင်ရာ၌ အကျွန်ုပ်သည်အားရဝမ်းမြောက်လှပါ၏။ ကိုယ်တော်၏တရားသည်လည်း ကျွန်ုပ်နှလုံးထဲမှာရှိပါ၏။
တခါတရံ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အကြံစည်ထက်ပိုပြီး လူအများတွေးတောကြံစည်မှုကို ပိုမိုဂရုပြုတတ်ပါသည်။ လူအများသည် သင်၏ဘဝခရီးကို မသတ်မှတ်နိုင်ပါချေ။
Read more: လူများအပေါ်ယုံကြည်အားကိုးခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်...
ဆရာဆိုး ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ် ရဲတိုက်ဟောင်းများစွာကို တွေ့ရှိပြီး၊ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအကြောင်း၊ မူဆလင်များအား ခရစ်တော်မွေးဖွားရာ သန့်ရှင်းသောမြေမှ မောင်းထုတ်ရန် အင်အားကြီးသော အနောက်နိုင်ငံသားများ နှစ်ပေါင်း၂၀၀တိုင် ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲဖြင့် စစ်ပွဲနည်းဖြင့်၊ ကြိုးစားခဲ့သည်။
Read more: အကြမ်းဖက်နည်းကို အောင်နိုင်ခြင်း